တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်း လူရမ်းကား မျိုးညစ်တွေက သူတထူးရဲ့ဘာသာရေးဝတ်ပြု ကိုးကွယ်တာကို မင်းမဲ့စရိုက် ပုံစံနဲ့ ပြသနာရှာလာတယ် – အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း (ထွေ/အုပ် နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က) ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလား ? လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ မရှိဘူးလား ? ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူ နှိမ်နင်းရမှာ မဟုတ်ဘူးလား ? ရမ်းကားသူတွေကိုဟန့်တားရမှာ မဟုတ်ဘူးလား? အေးချမ်းစွာနေတဲ့ ပြည်သူကို ကာကွယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား? | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်း လူရမ်းကား မျိုးညစ်တွေက သူတထူးရဲ့ဘာသာရေးဝတ်ပြု ကိုးကွယ်တာကို မင်းမဲ့စရိုက် ပုံစံနဲ့ ပြသနာရှာလာတယ် – အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း (ထွေ/အုပ် နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က) ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလား ? လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ မရှိဘူးလား ? ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူ နှိမ်နင်းရမှာ မဟုတ်ဘူးလား ? ရမ်းကားသူတွေကိုဟန့်တားရမှာ မဟုတ်ဘူးလား? အေးချမ်းစွာနေတဲ့ ပြည်သူကို ကာကွယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား?
တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်း လူရမ်းကား မျိုးညစ်တွေက သူတထူးရဲ့ဘာသာရေးဝတ်ပြု ကိုးကွယ်တာကို မင်းမဲ့စရိုက် ပုံစံနဲ့ ပြသနာရှာလာတယ် – အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း (ထွေ/အုပ် နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က) ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလား ? လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ မရှိဘူးလား ? ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူ နှိမ်နင်းရမှာ မဟုတ်ဘူးလား ? ရမ်းကားသူတွေကိုဟန့်တားရမှာ မဟုတ်ဘူးလား? အေးချမ်းစွာနေတဲ့ ပြည်သူကို ကာကွယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား?
လူရမ်းကား မျိုးညစ်တွေက
မင်းမဲ့စရိုက် ပုံစံနဲ့ ပြသနာရှာလာတယ်
ဒီ အဆင့်မှာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း
(ထွေ/အုပ် နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့က)
ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူ နှိမ်နင်းရမှာ မဟုတ်ဘူးလား
အေးချမ်းစွာနေတဲ့ ပြည်သူကို ကာကွယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား
အစိုးရတရပ်ရဲ့ ဝတ္တရားကို ပျက်ကွက်ပြီးတော့
ရာဇဝတ်သား လူရမ်းကားတွေကို ပြောချင်ရာ ပြောခွင့် ပေးခဲ့ တယ်
အခြားဘာသာတခုကို စိတ်တိုင်းကျစော်ကားခွင့် ပေးခဲ့တယ်
လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်
အခင်းဖြစ်တဲ့ အချိန်က မြို့နယ်အဆင့်လောက်က
ခွင့်ပြု ချက်နဲ့ သော့ခတ်ပြီး ချိတ်စည်းခဲ့တယ်
ချိတ်ပေါ်က တံဆိပ်ကိုကြည့်ရင် ဘယ်အဆင့်ကကောင်က
ချိတ်ပိတ်သလဲဆိုတာ တရားခံပေါ်တယ်
လူရမ်းကားတွေ စိတ်ကျေနပ်သွားအောင်
နောက်ရက် ချိတ်ပြန်ဖွင့် သော့ဖွင့်ပေးပြီး တောင်းပန်စကား
အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်က ကိုယ်တာဝန် ကိုယ်
ယူပြီး လူလို သူလို လုပ်ရမဲ့အလုပ်
ဒါကို သာသနာရေးဝန်ကြီးလုပ်တဲ့သူက သူမသိဘူး သူနဲ့
ဒေါ်စု မနီလာက ပြန်လာမှ ကိုင်တွယ်မဲ့ပုံပြောတယ်
ဟိုက မနီလာက ပြန်လာတော့ တိုက်ချီဒို နဲ့အလွမ်းသယ်ပြီး
ဥရောပ ခရီးစဉ် ထွက်သွားတယ်
ဘာအဆင့်ရှိတဲ့ ကောင်လဲ လို့ မေးချင်တာ
၁၉၉၀ ကထဲက ဝတ်ပြု မိန့်ရထားတဲ့ အထောက်အထားလဲ
နောက်ထပ် ဘာကို အရစ်ရှည်နေတာလဲ
အရင်က ဝတ်ပြု ခွင့်ကို သဘောမကျရင် အခု ခွင့်ပြု မိန့် အသစ်ထုတ်ပေးလိုက်ပေါ့
လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိတယ်ဆို
ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ ဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်းပြ
သတ္တိရှိရင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခွင့်
မပြု နိုင်ပါဘူး…..လို့ ဗျောင် ကြေငြာလိုက်
ကျက်သရေတုန်းတယ်
← Proof of Wirathu was alreadyaMilitary Intelligent spy implant mole in monkhood at about 1997
ဦးတင်မောင်သန်း “မုန်းတီးရေးသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြဿနာ ရှာသူတွေအလိုကျ ဖြေရှင်းတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်မယ်။အရေးယူဖို့လည်းပြတ်ပြတ်သားသားတောင်းဆုိုမယ်” →